कहाँ छ फुटबल खेलाडी संघ ? - Khelpati
कहाँ छ फुटबल खेलाडी संघ ? एन्फा राजनीतिमा हराएको खेलाडी संघ
आइतवार, आश्विन ११, २०७७ रमेश सुवेदी
काठमाडौं । फुटबल खेलाडीको समस्या र हक अधिकारका लागि क्रियाशिल रहनुपर्ने संस्था हो, राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी संघ ।
संस्था स्थापनाको १६ वर्ष पुरा भएको छ । संस्थाको नेतृत्वमा पूर्व खेलाडी राजेश मानन्धर रहेका छन् ।
खेलाडीको समस्याको सेतु बन्नुपर्ने संस्था प्राय निष्कृय रुपमा बस्ने गरेको छ ।
तत्कालिन समयमा खेलाडीबीच सहयोग आदन प्रदान गर्न संस्था स्थापना गरिएको थियो । संस्थाभित्र सबै खेलाडी अटाए । संस्था बलियो हुदै गयो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले समेत संस्थालाई संघको मान्यता दियो । खेलाडी संघले एन्फाको केन्द्रिय चुनावमा मताधिकार प्राप्त गर्यो । एन्फा चुनावमा संस्थाको प्रभाव देखिने थाल्यो ।
तर विस्तारै संस्था चुनावको समय मात्र सक्रिय बन्ने थाल्यो । खेलाडीका मुद्धालाई केन्द्रसम्म पुर्याउने संस्था अन्य समय मौन देखिदै आएकाे छ ।
पछिल्लो समय एन्फामा कर्मचारी समायोजनको मुद्धा प्रखर बनेको छ । कर्मचारीको न्युनतम तलबको मुद्धा चर्को रुपमा उठेको छ । एन्फा पनि कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गर्न तयार छ ।
कर्मचारी जस्तै समस्या खेलाडीले भोगिरहेका छन् । खेलाडीलाई सामान्य तलब समेत एन्फाले दिदैन । राष्ट्रिय फुटबल टिमका पुरुष खेलाडीले जनही १५ हजार र महिलाले ७ हजार तलब प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
अझ महिला खेलाडीका खासै प्रतियोगिता हुदैनन् । उनीहरुका व्यवसायीक क्लब छैनन् । खासै खेल्ने अवसर नि पाउँदैनन् । अन्य आयस्रोत छैन । एन्फाले दिने मासिक ७ हजार तलबमा खेलाडीले संघर्ष गर्नुपरेको छ । विभाग बाहिरका खेलाडीलाई त शहरमा बस्नै असम्भव जस्तै छ ।
यस्ता ज्वलन्त समस्या खेलाडीका छन् । तर विगत लामो समयदेखि खेलाडीको तलब नबढेको बिषय एन्फामा पुर्याईदिने कोही छैन । खेलाडीको संस्था आफै भने हरेक मुद्धामा मौन प्राय बस्दै आएकाे छ ।
खेलाडीहरु संस्थाको अस्तित्वमै प्रश्न गर्छन् । खेलाडीहरु संस्था र नेतृत्वसंग दिक्क छन् । उनीहरुलाई संस्थाको कुनै भरपनि छैन ।
खेलाडी संघमाथि लाग्ने आरोप भनेको नेतृत्व केन्द्रको इशारामा मात्र चल्यो । केन्द्रलाई रिझाउँदै नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थमात्र पुरा गर्यो । जसले गर्दा खेलाडीका मुद्दा सधै ओझेलमै परे ।
‘खेलाडीसंघ हुनु र नहुनुको केहि औचित्यनै छैन । खेलाडीलाई आपत विपत पर्दा बोल्दिने संस्था व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झेको छ । तलबका बिषयमा खेलाडी बोलिरहेका छन्, सिनियर खेलाडीले सम्मानजनक बिदाईको आवाज उठाईरहेका छन् । संघले साथ दिनुपर्ने हो । तर संघ कतै देखिदैन ।’ राष्ट्रिय टिमका एक सदस्य भन्छन् ।
२०७४ साल चैतमा भएको चुनावमा राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङलाई ४ मतले हराउँदै मानन्धर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । एन्फा मुख्यलयमा भएको चुनावमा मानन्धरले १६ मत प्राप्त गरेका थिए भने गुरुङले १२ मत पाएका थिए ।
निर्वाचित भएपछि मानन्धर खेलाडीको मुद्धा भन्दा व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ननै उद्यत देखिन्छन् । केन्द्रिय चुनावमा गरेको सहयोगका कारण अध्यक्ष मानन्धर एन्फाबाट प्रशस्त लाभकाे अवसर पाएका छन् । १३ औं साग र बंगबन्धु गोल्डकप उनी सहायक प्रशिक्षक बन्ने मौका पाए । भारतको गुवाहाटीमा समेत उनी यू–१९ टिमको व्यवस्थापकको भूमिका पाए ।
पूर्व सदस्य हरि खड्का संघले खेलाडीको हक हितका लागि आवाज उठाउनुपर्ने र केन्द्रले मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘खेलाडीको हक हितका लागि संघ बोल्न सक्नुपर्याे । आवाज उठाउन सक्नुपर्याे । उठाएका माग सम्बोधन होला या नहोला तर माग गर्न सक्नुपर्छ ।’ खड्का भन्छन् ।
‘खेलाडी संघले आवाज उठाएपछि नेतृत्वले पुरा गर्ने बिषयमा सोच्ने हो । कार्यसमितीलेनै सबै काम गर्ने हाे । खेलाडी संघले बीचमा बसेर काम गरिदिने हो ।’ नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघका उपाध्यक्ष समेत रहेको हरि भन्छन् ।
संघसंग धेरै गुनासो महिला खेलाडीको छ ।
संघले आफ्ना समस्या केन्द्रमा नपुर्याउदा संस्था भएको र नभएको महशुश गर्न नपाएको खेलाडीको गुनासो छ ।
‘हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका समस्या भनेकै तलब र अभ्यासको कुरा हो । राष्ट्रिय खेलाडी ७ हजार तलब आउँछ भन्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको छ । आफैपनि धेरै बोल्दा छुच्चो हुन्छौ । पदाधिकारीले हेर्ने नजरनै फरक पर्छ ।’ नाम नखुलाउने सर्तमा एक महिला खेलाडी भन्छिन् ।
‘यस्तो अवस्थामा खेलाडी संघले बोल्दिनुपर्ने हो । तर संघ मौन छ । पदमा भएका मान्छे नबोलिदिदा खेलाडीलाई समस्या त परिहाल्छ ।’ ती महिला खेलाडी भन्छिन् ।
खेलाडी संघका संस्थापक अध्यक्ष राजुकाजी शाक्य संस्थाले खेलाडीको बिषयमा नबोल्दा खेलाडीहरु निराश रहेको बताउँछन् ।
‘जुन तरिकाले काम गर्ने भनेर साथीहरु आएका थिए । परिवर्तनका बिषय उठाएका थिए । त्यो अनुसार पक्कै काम भएको छैन । जसका कारण खेलाडी समेत निराश छन् । संघ भएको अनुभव खेलाडीले गर्न पाएका छैनन् ।’ राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान तथा प्रशिक्षक शाक्यले भने ।
१६ वर्षे यात्रामा संघले जम्मा तीन अध्यक्ष मात्रै पाएको छ ।
शाक्य संस्थापक अध्यक्ष हुन् भने दोस्रो अध्यक्षको रुपमा पूर्व कप्तान उपेन्द्रमान सिंह रहेका थिए । तेस्रो अध्यक्षको रुपमा राजेश मानन्धर रहेका हुन् । संघ अध्यक्षको कार्यकाल ४ बर्षको रहेको छ ।
मानन्धरको पहिलो कार्यकाल तेस्रो बर्षमा चलिरहेको छ । उनी नेतृत्वमा आएपछि संघले कुनैपनि औपचारिक कार्यक्रम गरेको छैन भने सामान्य सूचना र बिज्ञप्ती समेत निकाल्न सकेको छैन ।
अध्यक्ष मानन्धर भने सबै आरोप निराधार रहेको बताउँछन् । उनी आफु कुनै प्रचारमुखी नभएर खेलाडीको हत हितकै लागि काम गरिरहेको बताउँछन् ।
‘आरोप लाग्नु स्वभाविक हो । मैले खेलाडीकै हकहित र आवाज उठाउँदै आएको छु ।’ हाल राखेप सहायक प्रशिक्षक रहेका मानन्धरले खेलपाटीसँग भने ।
राष्ट्रिय टिमका पूर्व डिफेन्डर समेत रहेका मानन्धरले आफुले कुनै मिडियाबाजी नगर्ने स्वभावको भएको र केन्द्रसँग सिधै पहुँच भएका कारण बाहिर हल्ला नगरी खेलाडीको बिषयमा बोल्ने गरेको बताउँछन् ।
‘अरुले जस्तो मिडियामा बोल्दिन । हिरो बन्न पनि खोज्दिन । अलि कति पँहुच पनि भएकाले होला अध्यक्ष र महासचिवसँग सिधै कुरा गर्ने गरेको छु । बैठकमा पनि उत्तिकै कुरा राख्दै आएको छु । तबलको बिषयमा सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ । मैले कामनै नगरेको हैन । खेलाडी विदाईको विषयमा पनि बोलिरहेको छु । देखावटी काम गर्दिन । जे गर्छु खेलाडीलाई सोधेर गर्दै आएको छु ।’ मानन्धरले भने ।
किन ओझेलमा ला मासिया ?